China GRH Guorui Hydraulics, mutungamiri mune yemuchadenga basa mapuratifomu Mugadziri uye Mutengesi | Guorui
Hydraulic giya pombi
GRH Guorui Hydraulics, mutungamiri mumapuratifomu ebasa remuchadenga
Aerial work platform (AWP) imhando yemidziyo yakakosha inogadzirwa uye inogadzirwa kuzadzikisa zvido zvepamusoro-soro mashandiro. Inogona kusimudza vanoshanda, maturusi, zvishandiso, nezvimwewo kuburikidza neplatifomu yebasa kuenda kunzvimbo yakasarudzika yekuisirwa kwakasiyana siyana, Kushanda kwekuchengetedza, uye nekupa chengetedzo kune vanoshanda. Iyo yekumuchadenga yebasa chikuva ine dzakasiyana siyana dzekumvura maficha, uye ine hunhu hweyakasimba chigadzirwa tekinoroji uye yakakwira yakawedzera kukosha. Rwizi rwekuzasi rwunonyanya kusanganisira kuvaka, kuvaka ngarava, kugadzira ndege, simbi yekumisikidza uye kugadzirisa, kushongedza kwekuvaka uye kuchenesa, mainjiniya emauto, dzimba dzekuchengetera zvinhu uye zvekushandisa, nhandare yendege uye chiteshi chebasa uye mimwe minda.
Mumusika wepasi rose, North America, Western Europe neJapan ndivo vanogadzira epuratifomu yebasa remuchadenga. Terex neJLG muUnited States, Sky jack muCanada, Haulotte muFrance, uye Aichi kuJapan zvakakura pamwero, vari pakati pevashanu vepamusoro pasirese. Iko kusunganidzwa kwepasirese kweAWP kwakakwirira, uye zvigadzirwa zvemumba Dingli neXingbang zviri kukura nekukurumidza. Muna 2018, Dingli akarova chinzvimbo chegumi pasi rose, uye Hunan Xingbang Heavy Viwanda ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe. Mumakore achangopfuura, Lingong, Xugong, Liugong, Zhonglian nemamwe makambani mazhinji akawedzerawo maR & D uye kuwedzera kwavo musika, uye vari muchikamu chechipiri cheindasitiri. Mune ramangwana, sezvo chikamu chemusika chiri kuramba chichiwedzera, makambani mazhinji echinyakare ekugadzira achazadzawo munzvimbo ino. Pane akasiyana akasiyana mumakwikwi pakati pezvipenga zvemukati muindastiri.
Kuvandudzwa kwemapuratifomu emuchadenga emuchina kuChina kunononoka, uye musika wepamba haunyatso kuziva nezveindasitiri iyi. Aerial basa mapuratifomu haana kushandiswa zvakanyanya. Huwandu hukuru hwebasa remuchadenga richiri kungodzorwa ne scaffolding kana kutsiviwa ne forklifts. Muzviitiko zvishoma, chikuva chinotomisirwa pamusoro penzvimbo. Bhokisi kuti uwane chinangwa chekukwirira-kwakakwirira mashandiro. Muna 2018, huwandu hweAWPs muChina hwaive nezvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe, rinova gaka rakakura kana richienzaniswa ne600,000 mayuniti muUnited States uye mazana matatu ezviuru munyika gumi dzeEurope.
Kubva 2013, iyo AWP yekumba ine avhareji pagore makomponi kukura chiyero cheinenge 45%, uye ichiri munguva yekumhanyisa-kukurumidza nguva. Kunyangwe iri maererano nehurongwa hwese, huwandu hwemunhu wega wega kana chigadzirwa chinopinda, chinotungamirwa nekuchengetedza, hupfumi, uye kugona kukuru. Mune ramangwana, musika weAWP wepamba une kanokwana ka5-10 nguva yekukura kwenzvimbo mune ramangwana.
Semutengesi akanaka kwazvo emapuratifomu ebasa remuchadenga, Guorui Hydraulics anga achinyatso kubatikana mundima iyi kweanopfuura makore makumi maviri. Yakashongedzerwa nemapombi egiya, hydraulic cycloid motors, magetsi emagetsi, uye ma hydraulic control valves, ndiyo chete inowirirana mubatsiri mutengesi weTerex hydraulic zvikamu muAsia. Iyo yakazara huwandu hwezvigadzirwa zvakagadzirwa nevapamba uye vekunze vagadziri veairi basa mapuratifomu
Iyo hydraulic mota yakanyanya kushandiswa muAWP ndiyo vhiri mota inoshandiswa kutyaira vhiri. Yakave yakazvimiririra nemhando dzekunze mumakore ekutanga. Guorui akaunza matarenda ekumusoro-soro kumba nekune dzimwe nyika, akazvimiririra akagadzira iyo GWD nhepfenyuro, uye akagadzira yakazara-dhisiki kazhinji yakavharwa hydraulic controller. Uye iyo yakasanganiswa vharafu mhando ruoko pombi, mushure mekusimbiswa nevekunze maOEMs, ikozvino yaziviswa zvizere kumusika.
PTC kuratidzwa kuchavhura mwedzi unouya! Bhuti ...
Nyowani chigadzirwa kuvhurwa kubva kuGuorui hydraulic ...
Guorui hydraulic (GRH) sweeper yaive shippe ...
Kuongorora kwekutadza kwakajairika kwe hydraulic ...
Kupatsanura kwemagetsi emagetsi